Izithelo zomvini esifundeni sethu ziyisitshalo esingavamile, kodwa eminyakeni yamuva nje izinguquko ezibalulekile ziye zaqala ukuvela kulo magazini. Abalimi abaningi bayakwazi ukwenza i-viticulture, njengoba ikuvumela ukuba uthole inani elikhulu lemikhiqizo yekhwalithi elihle kakhulu. Futhi ngubani ozoyalile indlu yewayini?
Njengoba sesivele sikhulume ngalokhu, asikwazi ukuwaqaphela imigomo esemqoka ye-agrotechnics, ngaphandle kwalokho esingeke sikwazi ukutshala amagilebhisi esifundeni saseMoscow. Ukulungiselela ubusika kungenye yezici ezibaluleke kakhulu, okungezona ukugcinwa kwezimo eziholela ekungenakwenzeka kokuthola ukuvunwa okunenjongo.
Indlela yokuvikela amagilebhisi ekubunzima kobusika baseRussia?
Kuyinto elula futhi engabizi ukuhlela indawo yokuhlala efanelekayo. Vele uqaphele ukuthi okukhethwa kukho okungcono kakhulu kutholakala kuphela lapho umvini etshalwe yiyo yonke imithetho, futhi ububanzi nokujula komgodi wokutshala kwakungekho ngaphansi kuka-60x60 cm. Kulesi simo, phakathi komngcele ophezulu wenhlabathi kanye nokufakwa kwesigodi emgodini, kune-15cm yesikhala lapho amagilebhisi angafakwa khona. Emadolobheni, ukulungiselela ubusika kuhle kakhulu ezinhlokweni eziningi.
Indlela elula yilapho umvini usengumncane, umane uhlelwe emgodini (oqoshiwe ungene endandeni) futhi ufafazwe nge-peat noma i-sawdust yezinhlobonhlobo zezinkuni. Kubalulekile ukwenza lokhu kuphela esimweni esomile, ukuguqula umvini kanye nenhlabathi ngokwayo nge-1-2% isisombululo sulful sulfate. Ukuqoqa ngokucophelela wonke amaqabunga omvini awile, njengoba ziyisitolo esiphezulu sezinambuzane kanye nezinambuzane.
Ungakhohlwa ukumboza inhlabathi ethuliwe ngenento engenamanzi. I-ruberoid efanayo iyafaneleka kakhulu. Ukoma kubalulekile lapha, ngoba amagilebhisi anomsoco emadolobheni (ukulungiswa ebusika esikuxoxisana ngawo) uzophuma emakhazeni.
Kunezinye izindlela zokuhlela izindawo zokukhosela. Zisebenza kakhulu ngokufana nezihlahla ezindala. Kulesi simo, umvini kufanele ubeke phezu kwamabhodi ahlanzekile, uwahlenge ngobumnene. Uma kungekho ndlela yokuthola amabhodi, ungabeka bese ugoba umhlaba owomile.
Ngaphezulu kwalokhu kuklanywa, kubalulekile ukufaka ama-arcs asekela. Akudingeki ukuba uhambe kahle, uwenze ube ngensimbi noma epulasitiki, njengoba ukuhlukahluka kwama-arcs avela emagatsheni kuyafaneleka kakhulu. Ukufihla umvini ezindaweni ezisemadolobheni kwaba yithembeke ngangokunokwenzeka, ngaphezu kwalolu hlobo "lokushisa okushisa" udinga ukubeka spunbond ezinqabeni ezimbalwa. Le nto "iphefumula", idlula ukuphuma kwamanzi ngaphandle futhi ivimbele ukungena kwe-condensate futhi iyancibilikisa amanzi emvinini.
Kubalulekile ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuthembekile ebangeni elibhakabhaka elikhanyayo, elingavusa ukuvuka kwezinso ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kungafinyelelwa ngokubeka "i-greenhouse" yakho ye-spruce lapnik yakho. Lesi silinganiso singaba kuhle ukuvikela amagilebhisi avela kumagundane amancane. Kungaba kuhle ukubeka izilonda ezinobuthi ngaphansi kwamagatsha ase-spruce.
Kodwa-ke, uma kungekho ukushisa okuqinile endaweni yakini, ungazama ukuhlakulela izinhlobo ezingavumelani zamagilebhisi esifundeni saseMoscow. I-Saperavi enyakatho naseSukriba yabonakala iyona engcono kakhulu. Esikhundleni sabo, indawo yokuhlala elula ye-lapnika iyanele, ngoba kunesidingo sokuqinisekisa ukushisa okunamandla nokuqhwa.
Uma wenza konke okulungile, khona-ke amagilebhisi asezindaweni zasemadolobheni (ukulungiselela ubusika esasitshela kuso) uyovuzwa ngokuvuna okuhle kakhulu kanye nemfanelo ephakeme yamajikijolo.
Indlela yokukhulisa i-orchid ekhaya
Fennel - ekhula ezweni
Ukutheleleka Nosocomial esikhathini kwangemva kokubeletha
Kuphi aphumule Februwari, ngenduduzo
Siya ukuphumula. Ingakanani i-visa Finland?
Kungani dream of a webele? oneiromancy
Phambili umsebenzi usekhona uma .... Yiziphi izimo wokusindisa yesevisi ungaphazanyiswa futhi kanjani simthole?
Umhlangano yebutho ikhaya simo
Aphumule Abkhazia ngo-Okthoba. Izibuyekezo nezithombe zezivakashi
Research Institute Wezingane izifo Petersburg: ukubuyekezwa kanye ikheli
Yikuphi nemengamo endlini kungcono? Izinhlobo ukufakwa, umhlobiso
Ejenti Antifungal 'Rumikoz'. Yokusetshenziswa
Uyini aerator ophahleni